Isu hatina masangano uye hatina hukuru hukuru kana mutungamiri wenyika. Musoro wekereke haisi mumwe kunze kwaJesu Kristu pachake (VaEfeso 1: 22-23).
Ungano imwe neimwe yekereke yaKristu inodzivirira, uye iShoko raMwari rinotibatanidza muTenda Rumwe (VaEfeso 4: 3-6). Isu tinotevera dzidziso dzaJesu Kristu nevaApostora vake, uye kwete dzidziso dzevanhu. Isu tiri vaKristu chete!
Tinotaura apo Bhaibheri rinotaura, uye isu tinonyarara apo Bhaibheri rinyerere.
Mashoko Akanaka: Mazvivako Zvitsva zveInternational Ministries
Takazadza zvose zvekuvandudza kumatanda edu uye munguva ichangobva kutanga webhusaiti yedu itsva. Iyi itsva inowanikwa muInternet yakagadzirirwa kubatsira makereke aKristu uye vose vanotsvaka nzira yakanakisisa yaMwari. Nzvimbo yedu itsva yehupfumi huchabatanidza huwandu hwezvinhu zvitsva uye zvigadziridzo zvingave zviri nani kushumira machechi aKristu pasi rose.
Zvinyorwa zvedu zvepasi rose zvekereke dzaKristu zvakadzorerwa zvakare uye zvichabatanidza purogiramu yepachena yevose Android Smart Phones uye Iphone pasi rose.
Isu tinofara pamusoro remangwana rekereke dzaKristu paIndaneti. Ndinokutendai pamusoro pezvose izvo umwe neumwe wenyu ari kuita mumunda wemizambiringa waIshe. Rudo rwako nekutsigirwa kweushumiri hwedu kunofanirwa zvikuru.
Ndapota yeukai muminyengetero yenyu apo isu tinoshanda kushandira makereke aKristu pasi rose. Mwari akanaka!